बढ्दो कोरोना संक्रमण : नेपालमा देखियो यूके भेरियन्ट, कति घातक ?
नेपालमा पनि नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलले नेपालमा पनि यूके भेरियन्ट देखिएको बताए ।
‘संसारमा तीन प्रकारको नयाँ भेरियन्ट देखिएको छ । भाइरसले समयसमयमा रूप परिवर्तन गरेर नयाँ भेरियन्ट बनाएको छ’, उनले भने, ‘बेलायत भेरियन्ट नेपालमा पनि देखिएको छ । यो भेरियन्ट १३० बढी मुलुकमा फैलिएको छ ।’ कम उमेर र बालबाबालिकामा पनि यूके भेरियन्ट देखिएको छ । ‘बालबालिकादेखि ५० वर्षसम्मकालाई बेलायतको भेरियन्ट देखिएको छ’, उनले भने, ‘छिटो संक्रमण फैलिने र सर्ने हुन सक्छ । जुन प्रकारको भाइरस भए पनि स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्नु नै पर्छ ।’
दक्षिण अफ्रिकाको भेरियन्ट ८० देश र ब्राजिलको भेरियन्ट ८० भन्दा बढी देशमा फैलिएको छ । अफ्रिका र ब्राजिलको भेरियन्ट छिमेकी देश भारतमा भेटिएकाले यसको जोखिम नेपालमा पनि बढेको उनको भनाइ छ ।
‘बजार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेसमा काम नपरेसम्म नजाने । यी क्षेत्रमा कडाइ नगरे भोलि बन्द गर्नुको विकल्प छैन । मठ, मन्दिर र विद्यालयमा पनि मापदण्ड कडाइ गर्नुपर्ने देखिएको छ’, उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालयले मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना गर्न सम्बन्धित क्षेत्रमा पत्राचारसमेत गरिएको उनले बताए ।
दोस्रो चरणको महामारी
काठमाडौं विश्वविद्यालय जनस्वास्थ्य विभागकी सह–प्राध्यापक डा. अर्चना श्रेष्ठले नेपालमा पनि दोस्रो चरणको महामारी सुरु हुन लागेको बताइन् । ‘दोस्रो चरणको महामारीमा जाँदै छौँ । नेपाल र भारतको हेर्दा पहिलो चरणमा भारतभन्दा एक महिनापछि नेपालमा सुरु भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै दोहोरिने जोखिम छ’, उनले भनिन् ।
समुदायमा द्रुत गतिमा संक्रमण फैलिएको समेत उनको निष्कर्ष छ । ‘समुदायमा कुन गतिमा सरेको छ भन्नका लागि जति धेरै पोजिटिभ आउँछ, त्यति छिटो समुदायमा सरेको हुन्छ । समुदायमा द्रुत गतिमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ’, उनले भनिन् ।
कति घातक नयाँ भेरियन्ट ?
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका रिसर्च युनिका प्रमुख डा. शेरबहादुर पुन नयाँ भेरियन्टको आ–आफ्नो क्षमता हुने बताउँछन् ।
‘भेरियन्टको आ–आफ्नो क्षमता हुन्छ । कुनै क्षमता घातक हुन्छ । कुनै द्रुत गतिमा फैलिने हुन्छ । कुनै पहिलाको भन्दा कमजोर हुने पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘अब भारतमा देखिएको दक्षिण अफ्रिकी, ब्राजिलियन र यूके भेरियन्टले कस्तो क्रियाकलाप देखाउँछ त्यसमा भर पर्छ ।’
नयाँ भेरियन्ट तीव्र गतिमा फैलिन सक्ने उनको तर्क छ । ‘जुन देशमा देखिएको हो त्यहाँ तीव्र गतिमा फैलिने भनिएको छ । शरीमा भएको इम्युन सिस्टम पनि छल्न सक्ने क्षमता छ भनिएको छ । भ्याक्सिनलाई पनि च्यालेन्ज गर्न सक्छ’, डा. पुन भन्छन् ।
सरकारले पनि जेठ असारमा संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले संसदमा भनेका थिए, ‘पोजिटिभ हुने क्रम बढ्दै गएको छ । जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगरे जेठ–असारमा कोरोना अर्को उच्च बिन्दुमा पुग्ने देखिन्छ ।’
डा. पुन पनि नेपालमा दोस्रो लहरको जोखिम रहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा दोस्रो लहर आउन सक्छ भनेर सुरुदेखि नै भनिएको हो’, उनले भने, ‘पहिलेको अनुभव पनि छ । के गर्‍यौँ, कहाँ चुक्यौँ समीक्षा गर्नुपर्छ । परीक्षणका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने छैन । जनघनत्व भएको ठाउँमा ध्यान दिनुपर्छ ।’
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३३९ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । मंगलबार २६० जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने बुधबार ३३९ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
'कोरोना महामारी सकिएको छैन, लापरवाही गरे अर्को चरणमा उक्लिने जोखिम छ' (अन्तर्वार्ता)
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत २५, २०७७, १७:४४:००